Isixhobo seRank: Ixabiso leSoftware yokuFakela kunye nokuQhatha ubuQhetseba | Martech Zone
Iinkampani zityala imali eninzi kuphuhliso lweeapp. Naphi na apho izibonda ziphezulu, ubuqhetseba bubonakala bulandela. Ngokwengxelo entsha evela IsixhoboRank, Ukufakela ii-App zeSelfowuni kunye nokubandakanya ubuqhetseba kuya kuxabisa abathengisi ukuya kuthi ga kwi-350 yezigidi zeedola ngo-2016
InkquboFlyer's Imeko yeSoftware yokuSebenzisa kunye noRhwaphilizo isekwe kubuchwephesha benkampani ye-DeviceRank ™ - isisombululo sokuqala seshishini sokuthintela ubuqhetseba ekuchongeni nasekubukhupheni ubuqhetseba kwinqanaba lesixhobo- kwaye sigubungela izixhobo ezizizigidi ezingama-500.
Khuphela iSifundo seFlayaFlyer
Uqikelelo olo lusekwe kwimisebenzi eyahlukeneyo yobuqhetseba, eqinisekisiweyo neyokukrokrelwa:
Ukuchazwa gwenxa kwedatha yokucofa ubuqhetseba.
Ukufakwa okuhlawulweyo kwizixhobo zobuqhetseba.
Ubuqhetseba kunye nemidlalo ye-in-app.
Ukujolisa ekujongeni nasekujongeni ubuqhetseba.
Ngokokuma komhlaba, amazwe anamaqondo aphezulu okufaka kunye nokubandakanya ubuqhetseba kwintengiso, xa kugcinwa abantu abahambahambayo, yiJamani, iAustralia, iTshayina, iCanada ne-UK, ilandelwa yi-US, iRussia neFrance. Uphando lubonisa ukuba abakhohlisi bazama ukujolisa kumazwe athile kuxhomekeke kwintlawulo abanokuyifumana ngokukhohlisa indawo yabo ukuze benze ubuqhetseba.
Amazwe aneendleko eziphezulu kufakelo ngalunye kunye neendleko zokuhlawulwa kwezenzo zinenqanaba eliphezulu lobuqhetseba, ngelixa imimandla eneentlawulo eziphantsi kakhulu-kubandakanya i-Indonesia, i-India, iBrazil, iVietnam, kunye ne-Thailand zinenqanaba eliphantsi lobuqhetseba.
Isixhobo seRank sisixhobo sokuqala sobuqhetseba besoftware yokuchonga kunye nokuthintela ubuqhetseba kwinqanaba lezixhobo. Itekhnoloji eyahlukileyo isebenzisa inkqubela phambili yamva nje kwidatha enkulu kunye nokufunda ngomatshini ukuhambisa i-3x ukuya kwi-12x ngokhuseleko olungcono kunezisombululo ezisemgangathweni zeshishini.
Njengoko sibonile kufundo lwethu lwehlabathi, abakhohlisi kunye nabakhohlisi bayakhula ngokuya bephucuka, bekhohlisa abathengisi ekuhlawuleni zombini ufakelo kunye nokuzibandakanya nohlelo. I-DeviceRank ithatha indlela eyahlukileyo, isika ubuqhetseba emthonjeni kwaye yongeza ukungafihli kumzi mveliso wethu ukukhusela abathengisi, amaqabane ethu kunye nentengiso yonke. U-Oren Kaniel, umseki kunye ne-CEO ye-AppsFlyer.
I-AppsFlyer's DeviceRankTM Itekhnoloji isebenza ngokufanayo kwiCredit Score, ichonga indlela yokuziphatha engathandabuzekiyo kwaye inika ukhuseleko oluphuculweyo. Inika amandla i-algorithm yedatha enkulu eyenziweyo yokwakha ukungaziwa, ukulinganiswa kwemilinganiselo emininzi kwizixhobo zonke eziphathwayo.
Isixhobo ngasinye silinganisiwe kwisikali esivela kuC (ubuqhetseba), nge-B, A, AA kunye ne-AAA. Izixhobo ezinenqanaba elithi "C" azifakwanga ngokuzenzekelayo kufakelo oluchaziweyo lweAppFlyer kunye kubahlalutyi. Ngaphezulu kwe-1.4 trillion yokunxibelelana okushukumayo kuluhlu lweenkcukacha zethu zangaphakathi kule minyaka mihlanu idlulileyo, kunye ne-98% yazo zonke izixhobo eziphathwayo kwihlabathi liphela esele zilinganisiwe, i-DeviceRank yeyona teknoloji ibalaseleyo yokuthintela ubuqhetseba emhlabeni.
Ukongeza, uyilo olwahlukileyo lweDivayisiRank kunye nokufunda ngomatshini kuvumela isiseko sedatha kunye nealgorithms ukuba ikhule, ifunde kwaye iguqule njengoko izixhobo ezitsha eziphathwayo ziza kwi-Intanethi, unxibelelwano olutsha luyadweliswa kwaye iipatheni zokuzibandakanya zabasebenzisi ziyavela.
tags: zintsiwebunikezeloUkuzibandakanya kwesoftwareUbuqhetseba bohlelo lokusebenza lweselfowuniubuqhetseba besoftwareusetyenziso lweselfowuni fakela ubuqhetsebaufakelo losetyenziso lweselfowuni